Denmark: Wadaadka dumarka ka celiya furiinka, 3 sano oo xabsi ah halagu ciqaabo - NorSom News
Denmark: Wadaadka dumarka ka celiya furiinka, 3 sano oo xabsi ah halagu ciqaabo
Dowlada dalka Denmark ayaa soo jeedisay hindise sharciyeed cusub oo dhawaan la hor geyn doono baarlamaanka dalkaas, kaas oo ay dowlada dalkaas kusoo bandhigtay in ciqaab xabsi oo ilaa sadex sano gaareyso lagu xukumo wadaadada masaajida ee dumarka kahor istaago furiinka, iyaga oo daliishanayo shareecada islaamka.
Arintan ayaa timid kadib markii dumar muslimiin ah ay la hadleen warbaahinta, iyaga oo sheegay in marar badan ay dacwo ugu tageen imaamyada masaajida Denmark, iyaga oo ka codsanayo in laga furo nimankooda, si waafaqsan shareecada islaamka. Waxeyna sheegeen in waji-gabax ay kala soo kulmeen imaamyada masaajida, lagulana taliyay inay gurigooda ku noqdaan, ayna la noolaadaan nimankii ay dalbadeen in laga furo.
Dumarkan ayaa sheegay in lagu wargaliyay inaysan buuxin shuruudihii furiinka, ama gabadhu ay ninkeeda uga dalban karto furiin, sida ay qabto shareecada islaamka. Sidaas darteed aysan ninkeeda iska furi karin ama aysan warqada furiinka ka dalban karin.
Qaar kamid ah dumarka warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in nimanka ay dalbadeen in laga furo ay ahaayeen kuwo gacan-qaad u geystay ama ciqaab maskaxiyan u geystay, ayna ka dalbadeen furiin, markii ay ka diideena ay caawin weydiisteen imaamyada masaajida. Saas oo taheyna lagula taliyay inaysan ninkaas iska furi karin, iyada oo loo daliishanayo shareecada islaamka.
Warbaahinta Denmark ayaa isbuucyadii tagay si xad dhaaf ah u hadalheysay arrintan, taas oo dhalisay inay abuurto doodo badan oo siyaasi ah.
Wasiirka arrimaha soo galootiga iyo isdhexgalka Mattias Tesfaye ayaa cadaadis badan kadib soo bandhigay hindise sharciyeed cusub oo dowlada dalkaas ay rabto ciqaab xabsi ah oo ilaa sadex sano gaari karto lagu ciqaabo wadaadada dumarka ka hor istaaga furiinka, iyaga oo adeegsanayo shareecada islaamka.
Wasiirka ayaa sheegay in dowladu ay rabto in la muujiyo halista ay leedahay arrintan iyo cawaaqibta ka dhalan karto, hadii wadaadadu ay soo dhexgalaan arrimaha gaarka ah ee qoyska, iyaga oo adeegsanayo sharci aan waafaqsaneyn kan dalka Denmark.
Dadka aqoonta u leh dhaqanka dadka muslimiinta ah ayaa dhankooda warbaahinta ka sheegay in xeerkan cusub uusan wax weyn ka badali doonin arrintan, iyada oo aan si dhab ah loo darsin sida ay isugu xiranyihiin ku dhaqanka diinta islaamka iyo nolosha qoyska. Waxeyna sheegeen in sharcigan cusub uu ka muuqdo deg-deg iyo ka fiirsasho la´aan.
Xigasho/kilde: Tesfaye vil nu straffe sharia-imamer med op til tre års fængsel.
Previous articleDaawo: Aragtida labada guruub ee go´aankii gobolka Oslo ee masaajidka Tawfiiq
Next articleDowlada oo soo jeedisay in “dagpenger” loo sii dheereeyo dadka waxbaranayo.